Nọ n'ụlọ na-azọpụta ndụ: Agwaetiti Cayman na-aga n'ihu na nkwụsị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Nọ n'ụlọ na-azọpụta ndụ: Agwaetiti Cayman na-aga n'ihu na nkwụsị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Agwaetiti Cayman ga-anọ n'okpuru mgbachi mkpọchi elekere dị ka elekere asaa elekere asaa nke mgbede taa. "Staynọ n'ụlọ na-azọpụta ndụ" bụ ozi gọọmentị.
Na-ada ụda nke ịdọ aka ná ntị dị egwu na Tuesday, 24 March 2020, Cayman Islandsndị isi, nke Onye Isi Gọvanọ, Maazị Martyn Roper na Onye isi ala, Hon. Alden McLaughlin, kwuru na mba ahụ nọzi na mkpochi anya dị mkpa, na-agbaso ọnọdụ gbasara mgbasawanye nke obodo Covid-19 nje nke a kọọrọ n'ụtụtụ a.
Dr. John Lee kwuru, sị:
• Ọnọdụ 14 ọzọ anwalewo adịghị mma.
• A na-atụ anya nsonaazụ site na ụlọ nyocha CARPHA taa.
• Ọnụ ọgụgụ niile egosiri bụ 6, gụnyere ọnwụ 1
• Nnwale ule ọhụrụ ahụ sitere n'aka onye ọrịa na HSA
Onye nlekọta ahụike nke ahụike Dr. Samuel Williams-Rodriguez na HSA CEO Lizzette Yearwood kwuru:
• Ọzọkwa, ndị ezinụlọ asatọ nke onye ọrịa na ndị ọrụ 14 nke HSA nwere ike ịkpọtụrụ onye nwalere na HSA ma nọpụ iche n'ụlọ. Onye ọrịa ahụ ka na-abụghị mgbaàmà ugbu a maka COVID-19.
• Onye ahụ enweghị akụkọ njem.
Onye isi ala ahụ kwupụtara na gọọmentị ejirila arịrịọ maka "ndo na ebe" wepụrụ ya na ọ ga-abụ ihe enweghị isi maka gọọmentị ịga n'ihu ma ọ bụrụ na enyere iwu ndị a na anyị natara arịrịọ maka. Onye ọ bụla na-echegbu onwe ya banyere nsogbu akụ na ụba nke iwu anyị na-aga ime - Gọọmentị dịkwa oke, mana nsonaazụ akụ na ụba enweghị ike, m kwughachiri enweghị isi karịa ndụ.
Oge a ga na-alọta na-aga n'ihu n'abalị a:
• A na-ewebata oge dị ala site na elekere asaa nke abalị ruo elekere ise nke ụtụtụ kwa ụbọchị maka ụbọchị iri na-esote. Ndị RCIPS ga-enyocha okporo ụzọ maka ndị na-emebi iwu ịda iwu ka a ga-ejide.
• Site na echi (Wenezdee, 25 Machị) Gọọmentị ga-akwado azụmaahịa niile na-adịghị mkpa ga-emechi ma ndị ọrụ niile na-adịghị mkpa kwesịrị ịnọ n'ụlọ.
Companieslọ ọrụ ndị a bụ ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ ha nwere ike ịchọ ịrụ ọrụ n'oge oge mgbago ma a ga-agụpụ ha. Ha kwesịrị ịnwe Njirimara Companylọ Ọrụ na leta sitere n'aka Companylọ ọrụ ahụ na-akwado mkpa ọ dị ha ịrụ ọrụ n'oge awa mgbede.
• Mberede niile na ọrụ ndị dị mkpa gụnyere ndị uwe ojii na Ọrụ Nchedo, 911, Ọrụ Fire, Ọrụ Mkpọrọ, Omenala na Njikwa Ala, Ngalaba Ahụike Gburugburu Ebe obibi na Island Waste Carriers.
• Nlekọta mberede gụnyere HSA, Health City, Hospitallọ Ọgwụ Dọkịta, Ọrụ Mberede na andlọ Ọrụ Ọgwụ niile.
• Supermarkets, ya bụ Fosters, Hurley's, Kirk's, Kirk Market na Cayman Brac, Billy's Supermarket, Tibmart Co. Ltd, Cost U Less, Priced Right, Progressive Distributor, Cayisle Enterprises Ltd, Cayman Distributor Group, Jacques Scott Group, Blackbeard's, Uncle Clems Ndi nkesa, Heston Ltd, Maedac Supply Ltd, MacRuss Superstore, Chisholms Supermarket
• bankslọ nkwakọba akụ niile
• Akụrụngwa na Akụrụngwa ya bụ Port Authority, Water Authority, Cayman Water Company, CUC, Sol Petroleum Cayman Ltd, Rubis Cayman Islands Ltd, Homegas Ltd, Ofreg, Cayman Brac Power na Light, Gas dị ọcha, Refuel Ltd, Flow, Digicel, Logic na C3
• Ọchịchị na-agba ọtụtụ ndị ọrụ nọ n’ebe ọrụ Cayman ume ka ha nọrọ n’ụlọ.
• Ndị ọrụ bekee emechiela nnukwu akụkụ ọrụ ya yana ndị enyere ka ha rụọ ọrụ site n'ụlọ iji rube isi na gọọmentị chọrọ omume.
• Enweghị ihe akaebe ọ bụla nke otu ndị ọrụ ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ abụọ abanyela COVID-19; nke ahụ bụ akụkọ adịgboroja.
• The hotline hotline maka ndị chọrọ ịga njem maka mberede ma ọ bụ ihe ọmịiko bụ 244-3333.
Mịnịsta na-ahụ maka ahụike, Hon. Dwayne Seymour kwuru, sị:
• Ọ dị ezigbo mkpa ụbọchị iri ị ga-eji na-ewepu oge iji belata mgbasa nke COVID-19 na mpaghara.
Kọmishọna ndị uwe ojii Derek Byrne kwuru, sị:
• Site na iwu nke Gọvanọ nyere maka oge ị ga-alọta, ndị uweojii ga-eme ya ihe karịrị abalị iri na-eso ya.
• Ndị uwe ojii ga-eji ọgụgụ isi wee jiri ikpe ziri ezi mana a ga-enwe iwu siri ike maka usoro ị ga-alọta.
• Ndị a kwụsịrị ga-ewepụta aha ha na adres ha maka ileba anya n'okwu ikpe.
• Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii ga-eche echiche ziri ezi, oge a na-alọta abụghịkwa ebe a na-agaghị akwụ ụgwọ maka ndị mmadụ iji were ọrụ ha chere na ha dị mkpa.
Cayman Islands nsogbu coronavirus Oria ojoo COVID-19